Abaqhubi baseSpain abazula simahla | Iindaba zeGajethi
IiVillamandos | | Abaqhubi, Umnxeba
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele Izitshixo ezisixhenxe zokuqonda ukuphela kokuzula eYurophu ejikeleze ikona, kodwa namhlanje sifuna ukukunika ulwazi oluthe kratya esiqinisekileyo ukuba luya kuba lolona lunomdla kakhulu kwikhefu lakho elilandelayo okanye kuhambo lweshishini.
Kwaye abanye babaqhubi beefowuni eziphathwayo baseSpain baqalisile ukulungiselela izinto eziza kwenzeka ngoJuni olandelayo, xa kusenziwa imimiselo emitsha yeKhomishini yaseYurophu, ekungekho nto inokuhlawuliswa ngayo iroma, okanye into efanayo yokwenza iminxeba kunye nokuhamba ngolwandle ukusuka kwelinye ilizwe le-European Union. Namhlanje siza kukubonisa Ngabaphi abaqhubi abazula simahla eSpain.
3 Abanye abaqhubi beefowuni eziphathwayo
Umqhubi wemvelaphi yaseBritane Yeyona ikhawulezayo kuzo zonke ukubhengeza ukupheliswa kweendleko zokuzula Kwaye uninzi lwabathengi bakho bonwabele olu phawu, simahla, ukusukela kunyaka ophelileyo.
Ngokungafaniyo nabanye, iVodafone ithathe isigqibo sokuthobela izicelo zeKhomishini yaseYurophu ukusukela kusuku lokuqala kwaye inikezela ngokuzula simahla kungekuphela kwi-European Union, kodwa nase-United States, into ngokungathandabuzekiyo eyinike inzuzo enkulu kunabanye abaqhubi beefowuni eziphathwayo.
Zezi Iindawo ezibandakanyiweyo yiVodafone;
IVodafone iimeko zasimahla zokuzula
Apha ngezantsi sikubonisa iimeko zokuzula simahla kweVodafone, ngethamsanqa sele silumkisile ukuba akukho zininzi kakhulu;
Ukuzula simahla kuyafumaneka kubo bonke abathengi, kodwa kubalulekile ukuyivula ngaphambi kokuhamba
Ukubakho kokufowuna, ukuthumela i-SMS kunye nokukhangela kuyafumaneka, usebenzisa zonke iinkonzo esizibandakanyileyo kwinqanaba lethu
En esi sixhobo unemiqathango epheleleyo yale nkonzo
Inkampani yaseFrance, ngaphandle kobunzima kuye kwafuneka inikezele ngokuzula simahla, ngaphambi komhla obekiweyo Sele inikezela kubaxumi bayo kuwo onke amaxabiso oThando nakwiirhafu ezihamba kuphela ezibhaptiziweyo njengeGo. Ewe okwangoku, ayinalo ukhetho olufanayo njengeVodafone kwaye inikezelwa kuphela kwiZone 1, ngaphandle kokuba ibinako ukufikelela eUnited States okwangoku.
Zezi iindawo ezifakwe yiOrange;
Nazi iimeko eziphambili zokuhambahamba simahla kweorenji;
Iyafumaneka kubo bonke abathengi bezinga loThando kunye nokuHamba, ngaphandle kokufumaneka kwamaxabiso ezilwanyana asasebenza kwaye nenani elifanelekileyo labathengi
Iifowuni, i-SMS kunye nedatha evela kwinqanaba lethu zingasetyenziselwa, kubandakanya iivawutsha zedatha kunye ne-voicemail
Abanye abaqhubi beefowuni eziphathwayo
AyisiyiVodafone kunye neorenji kuphela ezinikezela ngokuzula simahla kwilizwe lethu, nangona kungekho baninzi kakhulu abaqhubi beefowuni ezibandakanya le nkonzo. Apha sikubonisa ezinye zezona zibalulekileyo kunye nenani elikhulu labathengi.
Umnxibelelanisi wefowuni ophathwayo osinika iifowuni kunye nedatha yokuhamba simahla, nathi inikezela ngokuzula simahla kumazwe angaphezu kwama-25, kubandakanya iUnited States. Ewe kunjalo, ukuze sikwazi ukufowunela kwaye sisebenzise le nkonzo kufuneka sisebenzise inkonzo yokufowuna.
Ukusebenzisa esi sixhobo Ungajonga zonke iimeko ezinikezelwa yi-FreedomPop.
Le yenye yezona zinto ziqhutywa ngabasebenzisi, hayi kwilizwe lethu kuphela, kodwa kwihlabathi liphela. Kwaye ikwabonelela ngokubanzi emhlabeni wonke. Ngelishwa ayisiyiyo yonke into entle njengoko ibonakala kwaye injalo kuxhomekeke kwindawo esikuyo, siya kuhlawuliswa ngaphezulu okanye ngaphantsi kweekhredithi ke ngobuchwephesha ngekhe sithethe ngokuzula simahla, nangona iyafana.
Ungajonga zonke iimeko zenkonzo LAPHA.
Okokugqibela kuya kufuneka sikhankanye okhethekileyo I-Lycamobile, ekhethekileyo kubathengi abavela kwamanye amazwe kunye neefowuni zamanye amazwe, Ukunikezela ngokuzula simahla kumazwe apho banobukho khona, ngakumbi nangakumbi. Ngaphambi kokuba uqalise ukhenketho lwakho lweholide okanye uhambo lomsebenzi, kuya kufuneka ujonge ukuba ipakethi yakho ibandakanya ukuzula, ukunqanda isimanga esibi.
Kule khonkco unokufumana zonke iimeko zenkonzo yeLycamobile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Abaqhubi » Aba ngabasebenzi baseSpain abazula simahla
Kusemthethweni: iXiaomi Mi6 izakwaziswa ngoAprili 19